Malunga nathi -Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd.
Ukuzalisa ityhubhu kunye nokutywina umatshini
Igumbi lesibini leTyhubhu
Ukugcwaliswa kwebhotile kunye nomatshini wokufaka
Intshayelelo yethu emfutshane
Imveliso ye Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd. esekwe ngo-2011, ngumenzi wobuchwephesha obandakanyeka kuphando, uphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nokuhambisa umatshini wokufaka ityhubhu, ukugcwalisa umatshini wokubhala, umatshini wokugcwalisa i-plasitc kunye nokufaka uphawu, umatshini wokupakisha imaski yobuso, umatshini ohamba rhoqo weplastiki, iwelding umatshini weplastikhi we-welding, umatshini wokwenza iplastiki, umatshini wokutywina i-blister, umatshini wokupakisha, njl njl.
Oomatshini bokupakisha bakaHengXing basetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso, amayeza, ukutya, iplastiki kunye namanye amashishini. Uninzi lweemveliso zethu zifumene izatifikethi ze-CE kunye neRoHS.
I-Hengxing izinikele kuphuhliso lwetekhnoloji ye-ultrasonic, ukudibanisa itekhnoloji ye-automation kunye ne-teknoloji ye-ultrasonic ngokugqibeleleyo kumatshini wokutywina ityhubhu yeplastikhi, ukoyisa iingxaki zokutywinwa kwendabuko okushushu, ukwenza ukucoceka okucocekileyo kunye nokuqina. Ngomzamo oqhubekayo weqela lethu lobuchwephesha, sifumene inani lezatifikethi zamalungelo awodwa omenzi wechiza, ekhokelela kwimikhwa yetekhnoloji ye-ultrasonic ekupakisheni nasekuqiniseni oomatshini.
I-Hengxing, eneqela elinomdla nelinamava, ihlala ifumaneka ukuhlalutya iimfuno zakho kwaye ikunike ezona zisombululo zisebenzayo kwaye ubuyele kuwe ngexesha. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu iphuhlise umatshini wombhobho wegumbi eliphambili, umatshini wokwenza ityhubhu kunye nomatshini wokugcwalisa kunye nokufaka uphawu kumatshini wokuthambisa. I-Hengxing ihlala ilandela ngokusondeleyo kunye neemeko zentengiso.
R Strong & D iqela, iinkqubo zovavanyo engqongqo, ngokwenza izixhobo ezikumgangatho ophezulu.
Ukugqwesa ekwenzeni inxalenye yomatshini, ezinikele kuzo zonke iinkcukacha, okwenza izixhobo zizinzile.
Ukuzisa isiqinisekiso kunye nesibonelelo, gcina abathengi banelisekile kwimishini yethu.
I-Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co, Ltd.